Oge Arbutus-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Oge: 2020-08-27 Hits: 42
Ugbu a bụ oge ọkọchị solicice mgbe cicadas na-agụ egwu ọzọ. Osisi anakpo n’elu ugwu na ala na-emepekwa ọnụ ọchị ha. Na cicadas na-eme mkpọtụ, bayberries na-eme ka amara ha pụrụ iche.
Duu dị ka silk, Arbutus jiri anyaukwu na-ackingụ igirigi mmiri ahụ. ha na-agbatị alaka ha na-acha akwụkwọ ndụ mgbe nile, ogologo akwụkwọ dị warara na-achị ọchị n’igirigi na mmiri ozuzo.
N’etiti ọnwa Juun, arbutus dị ụtọ ma dị ụtọ chara acha, osisi jupụtara na arbutus, dịka ụdọ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, nke jupụtara n’ugwu akwụkwọ ndụ.
Arbutus dị okirikiri, elu kpuchie obere ogwu. Mgbe o toro nke nta nke nta, ogwu ahụ na-adị nwayọ ma jiri nwayọ nwayọ. Họrọ otu n'ime ọnụ, ọnụ nke ire iji metụ ogwu ogwu bayberry, ị ga-enwe mmetụta dị nro ma dịkwa nro. Jiri nwayọ rie nri, uto uto ma dị ụtọ ga-agagharị n'etiti egbugbere ọnụ na ezé, mepee afọ gị ma hapụ ka ị ghara ịkwụsị .
The bayberries bụ ndị mbụ na-acha ọbara ọbara, mgbe ahụ ọchịchịrị na-acha ọbara ọbara, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oji. Ọ bụchaghị oji n’ihi na ọ na-acha uhie uhie, yabụ na ọ dị oji. Jiri nwayọ na-emeghe ya, ị nwere ike ịhụ anụ ahụ na-acha uhie uhie, egbugbere ọnụ na ire n'otu oge na-acha uhie uhie na-acha ọbara ọbara. Onweghi arbutus chara acha, gbara agba arbutus di uto ma di uto, ka i n’eri nri, ka ichoro iri.
Arbutus dị ka ndụ, dị ụtọ, dị ụtọ, na-enwu gbaa, na-enwu gbaa, ma kpuchie ya n'akụkụ ọ bụla nke ndụ.
Na njem nke ndụ, anyị ga-ezute ihe dị iche iche iji zute ọtụtụ mmadụ, ga-enweta nrịgo na mgbada, nke a bụ akara ndụ anyị. Ma ndụ dị mgbe niile n'aka gị, na-eme ihe ị chọrọ ime, na-enwekwa obi ụtọ kwa ụbọchị. Ndị mmadụ bi ugbu a na-enwe obi ụtọ n'oge.
Previous: Mmiri ozuzo na June
Ọzọ: SUNSOUL nwere ike inye gi ihe ichoro